प्रदीप र जसिताको मायामा बाधक को ? लभ स्टेशनको ट्रेलर रिलिज (भिडियो सहित) - bisalchautari.com
प्रदीप र जसिताको मायामा बाधक को ? लभ स्टेशनको ट्रेलर रिलिज (भिडियो सहित)
March 6, 2019 root
Love Station movie Pradeep Khadka and Jassita Gurung
काठमाडौं, २०७५ फाल्गुन २२, बुधबार । चलचित्र लिली बिलीबाट निकै रुचाईएका जोडी अभिनेता प्रदीप खड्का र अभिनेत्री जसिता गुरुङको नयाँ चलचित्र लभ स्टेशन आगामी २२ चैतबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउँदैछ । चलचित्र लभ स्टेशनको ट्रेलर मँगलबार काठमाडौंको क्युज सिनेमा हलमा एक समारोहबीच सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रदिपको कुराले जसिताको हासो रोकिएन :-